प्रचण्डले बुहारी मन्त्री बिना मगरका लागि यतिसम्म गरे !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं –कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको धेरै भयो । केही दिनयता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा समेत पुनर्गठनको चर्चा भइरहेको छ ।
सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर पनि ओलीले सबैलाई सहमत गराएका मन्त्री फेर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेकपाभित्र सबै पक्षको राय लिएर मन्त्री फेरबदलको तयारी गरिरहेका ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरे । नेपालसँगको छलफलबाट ओलीले केही राय लिएपनि प्रचण्डसँगको छलफल भने ओलीका लागि नमिठो बनेको छ ।
प्रचण्डले बुहारी मन्त्री बिना मगरलाई हटाउने विषयमा सहमति नदिएको र उनलाई हटाए राम्रो नहुने भनेर ओलीलाई धम्की दिएको चर्चा नेकपाभित्र चलेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न असफल भएकी र विभिन्न आर्थिक विवादमा तानिएकी मन्त्री मगरलाई जोगाउन प्रचण्डले ओलीसँग निहुँ खोज्न समेत पछि परेका छैनन् । तर ओली भने बिना मगरलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कायमै राख्ने मूडमा छैनन् ।
मन्त्री बिना मगरलाई हटाउने विषयमा विवाद देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लम्बिँदै गएको छ । प्रचण्डले अरुलाई हटाउन सहमति दिएपनि बुहारीलाई जसरी पनि मन्त्रीमै कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रचण्डको बुहारी मोहले नेकपाभित्र रडाको मच्चिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा सोमबार बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफल बुहारी मन्त्री मगरकै कारण अनिर्णित बनेको छ । केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्, त्यसमा बिना मगर समेत पर्छिन् । तर प्रचण्डले बिना मगरलाई हटाउन मानिरहेका छैनन् ।